» डेंगुका बिरामीलाई कस्तो आहार खुवाउने ?
१२ भाद्र २०७६, बिहीबार १३:००
२०७६ भदौ १२,काठमाण्डौं
डेंगु एक स्वयंः सीमित संक्रामक भाइरल रोग हो। यद्यपि डेंगुका बिरामीहरूको लागि उचित चिकित्सा स्याहार आवश्यक छ तर डेंगु ज्वरोको कुनै खास उपचार छैन। डेंगुले धेरै मध्यमदेखि गम्भीर लक्षणहरू निम्त्याउँछ।
निम्नलिखित कारणहरूले गर्दा आवश्यक छ ः
डेंगुबाट ग्रस्त हुँदा के खानुहुन्छः
चरण १ः उच्च ज्वरो आउँदा डेंगु संक्रमणको प्रारम्भिक चरणको लागि तरल डाइट
चरण २ः डेंगु ज्वरोका बिरामीको लागि सफ्ट आहार, जब ज्वरो शान्त हुन्छ र ऊ विस्तारै स्वस्थ हुन्छ
चरण ३ः रिकभरीको बेला सामान्य डाइट
तरल डाइट डेंगु ज्वरोको सुरुवाती चरणमा किन सुझाव दिइन्छरु
तरल आहार निम्न कारणको लागि सिफारिस गरिएको छ
– तरल पदार्थहरू भिटामिन, खनिज आदिमा समृद्ध हुन्छन् जसले बिरामीको द्रुत पुनः प्राप्तिमा मद्दत गर्दछ।
नरिवलको पानीः कागती पानी सुन्तलको रस
कालो अंगुरको रसः यो रगतको लागि उपयोगी छ। यो एन्टिअक्सिडन्टमा पनि धनी छ। अंगुर राम्रोसँग धुल्न नबिर्सनुहोस्। अंगुरलाई नुनपानीमा राख्नुहोस् र त्यसपछि बगिरहेको पानीमा धुनुहोस्।
अम्बाको जुसः यो गाह्रो तर धेरै प्रभावशाली लाग्न सक्छ। धेरैजसो केसहरूमा डेंगु ज्वरोमा रगत प्लेटलेट गणना घटाइन्छ। प्लेटलेट काउन्ट बढाउन अम्बाको रस प्रभावकारी हुन्छ।
पालक सुपः पालकमा भिटामिन, प्रचुर मात्रामा पोटासियम, फलाम र क्याटोटिन बी र लुटेन जिएक्सनथिन इत्यादि फाइटन्युट्रिएन्टहरूबाट समृद्ध हुन्छ।
बिटरुट सुपः बिटरुटमा पानीको धेरै मात्रा हुन्छ। भिटामिन बी, भिटामिन सी, खनिज ९मैंगनिज, पोटासियम, फलाम० यी आरबिसी गणना बढाउन धेरै मद्दत पुर्‍याउँछन्।
डेंगु ज्वरो उपचार चरण सफ्ट डाइट दिशानिर्देश
जब बिरामीहरू डेगु संक्रमणबाट मुक्त हुन थाल्छन् र तरल डाइटले राम्रोसँग सहन गर्न थाल्छन्। उनीहरुलाई नरम आहार दिइन्छ। नरम डाइटमा यी खाद्य पदार्थ समावेश हुनुपर्छ(
नरम आहारमा हुँदा के खानुपर्छ ?
– ओभरकोकड खिचडी चामल र दालको संयोजन
डेंगु ज्वरो उपचार चरण ः सामान्य आहार दिशानिर्देश
जब बिरामी निको हुन्छ, नरम डाइट राम्रोसँग राखिन्छ र राम्रोसँग सहन गरिन्छ। विस्तारै नरम आहारलाई सामान्य दैनिक आहारमा परिवर्तन गर्नुपर्छ। रिकभरी अवधिमा, बिरामीले उच्च क्यालोरी, उच्च प्रोटिन, कम फ्याट, भिटामिन, खनिज र एन्टिआक्सिडन्टहरू समृद्ध गैर(मसलादार आहार खानुपर्छ। द्रुत पुनः प्राप्तिको लागि उनीहरूको लागि प्रशस्त पानी पिउनु आवश्यक छ।